Apple inopa vanogadzira mashopu ekuunza maapps avo kubva kuIOS kuenda macOS | IPhone nhau
Apple inopa vanogadzira mashopu ekuunza maapps avo kubva kuIOS kusvika macOS
Ngirozi Gonzalez | | iOS 14, Noticias
Apple yakashanda kwemakore pane chishandiso chinobvumidza vagadziri homogenize maapplication ako uye kukwanisa kugadzira maapplication eIOS anotakurirwa macOS. Mushure memakore ebasa vakapa Mac Cataylst, seti yemidziyo inobvumidza vanogadzira kuisa maapps avo eAppad ku macOS. Muchokwadi, chinangwa chaApple ndechekuti maapplication ekugovana kodhi pakati peMac nePad uye mamwe mabasa anogona kuwedzerwa kune chero emidziyo. Kuva nhevedzano yezvishandiso, Apple iri kupa akateedzana eanogadzira mashopu ayo yaakadaidza «Uya neapp yako app kuMac ».
Catalyst Kudzidzisa Mashopu eVagadziri
Mac Catalyst inokutendera iwe kuunza yako iripo iPad app kuMac. Dzidza maitiro ekuwedzeredza kunyorera kwako uye shandisa Mac Catalyst kuumba yemuno Mac kunyorera iyo inogovera zvakafanana projekiti uye sosi kodhi. Ongorora ichangoburwa iPadOS 14 maficha anogona kukuchengetedza nguva panguva yekuita uku, uye uone kuti ungasanganisa sei mapuratifomu-akasarudzika maficha uye anotarisa anotaridzika uye anoita seAppKit, kuti ugone kugadzira iyo programu inonzwa iko pamba paMac.
Aya mashopu Ivo ndezvevagadziri chete avo vakagamuchira kukokwa. Nekudaro, hapana pateni yekukoka. Mune mamwe mazwi, kukoka kunofungidzirwa kuti kwakaitika zvisina kurongeka uye kuti havana kukokwa pasi pemaitiro chaiwo. Aya mawekishopu acharatidza mukana wemibvunzo yako wega uye kubvunzana neApple nyanzvi pakupera kwekuratidzira.
Parizvino, vashandisi vakagamuchira kukokwa vakakwanisa kusarudza pakati pezvikamu zvakagoverwa: Kukadzi 15, 18 uye 19 uye Kurume 8, 10 na12. Panogona kunge paine zvimwe zvikamu sezvo aya mashopu akatoitika mwedzi mishoma yapfuura. Kwavari, Apple nyanzvi uye mainjiniya vakapa zvakasarudzika Mac Catalyst tutorials online kune vanogadzira kutenderera pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inopa vanogadzira mashopu ekuunza maapps avo kubva kuIOS kusvika macOS
Iyo Apple nhevedzano "Yevanhu vese" yatove neyayo yakawedzera chaiyo app